Ny Tantara - Jiangsu Yongxiang hydraulic Co. Ltd
Production Team Built
Manompo mpanjifa tsara kokoa, tamin'ny taona 2008, nanao ny famokarana Yongxiang ekipa sy ny raharaham-barotra maro samihafa ny hydraulic faritra sy ny cylinders ORINASA MPANAMBOATRA, fanodinana, ny varotra sy ny asa fanompoana.
Noho ny fivoaran'ny raharaham-barotra, ny nohofana fototra afaka hihaona intsony ny famokarana sy ny fitantanana fangatahana. Yongxiang nanorina azy manokana fototra sy ny birao. Ka dia nataony tao fampiasana ny 2011.
Mba hampitomboana ny vokatra tsara, Yongxiang nividy ny 1 CNC milina foibe tamin'ny 2015. Tamin'ny taona manaraka, mandroso kokoa ireo nanana fitaovana mba hanatsarana ny orinasa hery.
Fanampian'ny manodidina ny pototry ny China Electronic Industry, mba ho tsara indrindra fampiasana izany tombontsoa voajanahary, Yongxiang nanorina ny sampan'ny Haimante Elektronika Co., Ltd in 2017.
Mba hanatsarana ny fahombiazany sy ny vokatra, Yongxiang manomboka ny fampiasana ny teknolojia ao amin'ny fanamboarana Namorona ny Robots. Rehefa avy debugging sy ny mihazakazaka, ny 1 milina tanana tsara ampiasaina amin'ny singa famindrana fanodinana.